Isikhombisa phezulu njengoba Amajita eshaye i-Lesotho | Scrolla Izindaba
Isikhombisa phezulu njengoba Amajita eshaye i-Lesotho
Elakuleli lishaye iLesotho ngamagoli ayisikhombisa eqandeni ngeSonto e-Wolfson Stadium e-Port Elizabeth ukunqoba kokuqala ku-Cosafa U-20 bedlulela endaweni yesibili ku-Group A.
Amagoli aqhamuka kuRowan Human, uOshwin Appollis, uTshepo Myeni kanye namagoli amathathu ashawe nguSinenjongo Mkiva abenele ukusiza Amajita aqophe ukunqoba kwabo ngesikhathi bedlala neLesotho.
Amajita aqale lo mkhankaso ngokulingana ngamagoli ama-2-2 neWarriors of Zimbabwe ngoLwesihlanu lwesonto eledlule.
Ngokuthola indawo yamazwe ku-Total U-20 African Cup e-Mauritania, iNingizimu Afrika yabaneminyaka engaphansi kwengama-20 bekufanele iwine ngamaphuzu aphezulu. Iqembu eliphambili kuwo wonke ngalinye kanye nabaphume phambili abagijime bazodlulela kuma-semi final.
Umqeqeshi waMajita uHelman Mkhelele utshele abakwa-Scrolla.africa ukuthi, wenelisekile ngokusebenza kweqembu lakhe.
“Asizange siqale kahle kodwa asilahlanga amaphuzu futhi ngangazi ukuthi sizobuyela ekwenzeni kahle. Namanje ngibona kwakufanele sinqobe ngesikhathi sibhekene neZimbabwe kodwa senza amaphutha amaningi,” kusho uMkhelele.
Amajita azobhekana nomholi we-log A iMozambique emdlalweni wokuhlunga ngoLwesibili, mhla zi-8 kuZibandlela kowezi-2020 e-Wolfson Stadium, umdlalo uzoqala ngo-15h30.